BBC Somali - Warar - Odayaal lagu dilay magaalada Kismaayo.
Odayaal lagu dilay magaalada Kismaayo.
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 29 September, 2012, 17:17 GMT 20:17 SGA
Ciidanka Kenya ee Kismaayo ku socda
Dagaalyahannada Xarakada Islamiga ee al-Shabaab waxaa la sheegay inay xalay ka baxeen magaalada dekedda ah Kismayo ee koofurta Soomaaliya, oo ahayd magaalada ugu weyn ee gacantooda ku hartay, dhaqaalaha ugu badanna ay ka heli jireen.
Ciidanka Kenya ee ka tirsan ciidammada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka hawl gelaya ayaa la sheegay inay joogaan meel 5KM u jirta Kismaayo.
Wararku waxay sheegayaan in magaalada maanta lagu dilay ugu yaraan afar qof oo rayid ah oo u badan rag odayaal magac leh iyadoo aanay jirin ciidan hadda gacanta ku haya magaalada.
Dadka magaaladan deggan waxay kaloo sheegeen in xarumihii al Shabaab ka baxeen ay bililiqeysteen dhallinyaro magaalada ka tirsan.